Vagari vemuHarare Vanoratidzira paMuzinda weKanzuru Vachinyunyuta neHuwori
Vagari vemuHarare varatidzira pamahofisi ekanzuru yeguta iri vachiti havasi kufara nehuwori huri kuitwa mukanzuru iyi.
Vagari vemuHarare vasvika pamahofisi ekanzuru paTown House zuva rorova nhongonya vachiimba vachiti havasi kufara nehuwori hwavanoti hwapfunya chisero mukanzuru yeHarare.
Varatidziri ava vanga vakatakura zvinyorwa zvakasiyana-siyana zvanga zvichitsoropodza nyaya yehuwori pamwe nekusatakurwa kwemarara munzvimbo zhinji dzeguta iri.
Mumwe wevanga vachitungamira kuratidzira uku, VaGeorge Makoni, avo vanoshanda nesangano reCenter for Community Development in Zimbabwe, vaudza meya weHarare, VaBenard Manyenyeni, kuti havasi kufara nenyaya dzehuwori dzavanoti dzanyanya mukanzuru yeguta.
Mumwe wevaratidziri ava, VaDenford Ngadziore, avo vanoshanda nesangano re hashtag Tajamuka/Sesijikile, vatiwo havasi kufara nemari dzekubatsirika dziri kupihwa vakuru-vakuru kana kuti ma allowances.
Meya vasati vapindura, mapurisa anodziwirira mvongamupopoto abva asvika ndokutanga kudzinga varatidziri ava paTown House. Paitika izvi, mapurisa abva asunga VaMakoni, avo vanga vave kuita semutauriri wevaratidziri ava ndokuenda navo, meya akasara asina wekutaura naye pavaratidziri ava.
VaMakoni vapomerwa mhosva yekuita zvemusarinya pavanhu kana kuti criminal nuisance sezviri pasi pechikamu 46 (2) (a) (ii) chemutemo weCriminal Law (Codification and Reform) Act Chapter 9:23.
VaMakoni, avo vanga vachimirirwa negweta rinoshanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights, VaObey Shava, vanonzi vazosunungurwa mushure mekubhadhariswa mari yenhendamurandu inoita madhora gumi.
Zvichakadai, VaManyenyeni vaudza Studio 7 kuti nyaya dzehuwori inyaya dzagara dzirimo mukanzuru asi vari kuedza nepavanogona napo kudzipedza.
Meya weHarare VaBernard Manyenyeni
Panyaya yemari dzema allowances dzinonzi dziri kupihwa vamwe vakuru-vakuru mukanzuru, VaManyenyeni vakurudzira kuti pawunzwe makambani asingadyidzane nekanzuru kuti azoferefeta nyaya iyi.
Panyaya yemarara, VaManyenyeni vakurudzira kuti hurumende igadzirise zviri kunetsa munyaya dzehupfumi vachiti marara mazhinji ari kuiswa nevanhu vanotengesera mumigwagwa kana nguva dzebasa dzadarika vachiti vanhu ava vari kuedzawo kutsvaga kuraramisa mhuri dzavo.
Vakurudzirawo veruzhinji kuti vasarambe vachingorasira marara pese pese kuitira kuti guta rigare rakashambidzika.
Vagari vemuHarare nhasi varatidzira pamahofisi ekanzuru yeguta iri vachiti havasi kufara nehuwori huri kuitwa mukanzuru iyi. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi...
Mumwe wevaratidziri ava, VaDenford Ngadziore, avo vanoshanda nesangano re#Tajamuka/Sesijikile, vatiwo havasi kufara nemari dzekubatsirika dziri kupihwa vakuru-vakuru kana kuti ma allowances.